> Resource> iOS> Olee naghachi iPhone Data Lost Ruru iOS 6 Jailbreak
Ẹkeme Naghachi iPhone Data Lost Ruru iOS 6 Jailbreak?
Ndị ọhụrụ iOS 9 e wepụtara na nso nso, na ọtụtụ iPhone ọrụ ikpebi imelite ha ngwaọrụ iOS 9. Iji mee ka iOS 9 ọzọ dị ike na ndị ọzọ mfe na-eji, ụfọdụ n'ime ha na-ewekarị jailbreak na iOS 9 na-agba ọsọ na ha iPhone 6s, iPhone 6 na ndị ọzọ na iDevices.
Ebe a na-abịa nsogbu nke na-atụghị anya data ọnwụ mgbe jailbraking iOS 9. The ekwe omume nke adịkwa gị mkpa data dị ka ozi ederede, kọntaktị, foto, olu memos, kalenda, videos na music bụghị ebughibu. Ma adịghị kwa nchegbu. Ị ka nwere nnukwu ohere iji naghachi iPhone data mgbe iOS 9 jailbreak.
Enweta ihe iPhone foto mgbake ngwá ọrụ mbụ: Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (n'ihi na Windows ọrụ). Nke a na usoro-enye gị ohere iji naghachi data site na ịnweta iTunes ndabere faịlụ. Ị pụrụ ọbụna kpọmkwem ike iṅomi na-agbake data si iPhone 6s / 6/5 / 4S / 4 / 3GS, mgbe ị na-adịghị iTunes ndabere.
Download ikpe mbipute n'okpuru.
2 Nzọụkwụ naghachi faịlụ site iOS 6 Jailbreak iPhone
Nzọụkwụ 1. iṅomi iTunes ndabere gị iPhone
Dị ka anyị nile mara, iTunes ga n'ịwa a ndabere faịlụ mgbe ị mmekọrịta iPhone na ya. Malite usoro ihe omume, na ihe nile ngwaọrụ na nwere iTunes ndabere faịlụ na kọmputa gị ga-scanned na-egosipụta. Họrọ ndabere nke ngwaọrụ gị wee pịa "Malite iṅomi".
Nzọụkwụ 2. Naghachi iPhone Data Lost Ruru Jailbreak
Mgbe iṅomi risịrị, hụrụ ọdịnaya iTunes ndabere ga-gosiri dị ka n'okpuru. Họrọ "Ndi ana-akpo" n'aka nri ka ịhụchalụ nkọwa. Tinye akà rà ndị ị chọrọ iji naghachi wee pịa "Naghachi" na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Ọ bụ naanị nnọọ mfe, onwe gị obi ụtọ!
Ọ bụ mgbe niile dị mkpa na-eme ka iTunes ndabere mgbe ị na-ekpebi nweta nkwalite gị iOS ma ọ bụ jailbreak ya. Na a iPhone data mgbake ngwá ọrụ, ị nwere ike mfe naghachi data si iTunes ndabere files.For iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4 na iPhone 3GS, ị nwere ike naghachi faịlụ site scanning ngwaọrụ onwe ya ozugbo.